धनी बन्ने उपाय [समय–चक्र] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ मंसिर १८, बिहीबार ०९:३३ गते
एकबारको जुनीमा संसारका सबैलाई होइन, तर धेरैलाई धनी बन्ने इच्छा पलाएको बुझिन्छ । ज्यादा धन थुपार्ने उद्देश्य राख्नुको मूल कारणमा धनले भौतिक सृुविधा खरिद गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने र यतिबेलाको मानवसमाज भौतिक सुविधा भनेपछि हुरूक्कै हुने अवस्था सिर्जना भएकाले हो भनिएको छ ।
खासमा त सिक्का र कागजमा कुँदिएको पैसारुपी धनभन्दा स्वास्थ्यरुपी धन र इज्जतरुपी धन नै मानवजीवनका लागि मह¤वपूर्ण हुन्छ, यद्यपि कागज र धातुमा कुँदिएको धनरुपी पैसालाई दैनिक प्रयोगका हिसाबले नभई नहुने वस्तुको रुपमा विश्वमानवले स्वीकारेको हुँदा आज विश्वमानव पैसारुपी धनका लागि ज्यान फालेर कुदेको देखिन्छ । यसो गर्नु ठीक हो वा गलत व्याख्या गर्दा पक्ष र विपक्षमा वादविवाद प्रतियोगिता नै आयोजना गर्न सकिन्छ र यसउपर चर्को बहस र विवाद हुने कुरामा कतै सन्देह छैन । अब यथार्थमा पैसारुपी धनैका लागि यतिविघ्न दौडादौड र कुदाकुद भएपछि इच्छुकहरुका लागि धन कमाउने विद्या बाँड्नु पनि एक खालको कर्तव्य हो भन्ने महसुस हुन गएको हुँदा आज चितवनको लोकप्रिय दैनिक पत्रिका चितवन पोष्टमार्फत धनी बन्ने केही उपायहरु सुझाउन खोजिएको छ । विश्वास छ, यी सुझावहरुबाट भौतिक सुविधाका लागि धन बटुल्न चाहनेहरुका लागि सानोतिनो ओखती साबित हुनेछ ।
सबैभन्दा पहिला मान्छेको मनमा पैसा कमाउनुलाई नै धन बटुल्ने मुख्य सूत्र हो भन्ने बुझाइ रहेको महसुस हुन्छ, यो कुरा पूरा सत्य होइन । बिनाकमाइ त धन बटुलिँदैन यो साँचो हो, तर खर्च गर्ने तरिका नमिल्दा जतिसुकै आम्दानी गर्दा पनि कहिल्यै धन जम्मा हुन नसकेको र धनी बन्ने चाहना पूरा नभएको अवस्था देखिन्छ । आवश्यक पर्दा खर्च गर्ने र नपर्दा उटपट्याङ खर्च नगर्दा पनि धन जम्मा हुन्छ र धनी बन्ने चाहना पूरा गर्न सहयोग मिल्छ । केही उदाहरण यस्ता छन् । हिजोआज एक व्यक्तिको शरीर ढाक्ने लुगाको प्रसंग कोट्याउँदा अचम्म लाग्ने विषय अघि आउँछ । सीधासीधा भन्दा के देखिन्छ भने एउटा पुरूषले आफ्ना लागि घरमा कम्तीमा १० ओटा पाइन्ट र १५ ओटा सर्ट राखेको देखिन्छ । यो त मध्यम वर्गीय पुरूषको विषय भयो । धनी कहलिएको पुरूषले त उस्तै परे पचास–साठी ओटा पाइन्ट र पचहत्तर–असी ओटा सर्ट पनि राखेको देखिन्छ । आइतबारदेखि शनिबारसम्म जम्मा सात बार हुन्छन् । दिनमा एक पाइन्ट र एक सर्ट लाउँदा पनि सातैबार लाउन सकिन्छ र पनि अरु पाइन्ट र सर्टको पालो आउँदैन । यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर मानिसहरु अलिकति पुरानो हुनेबित्तिकै वा अलिकति उध्रिँदा वा कुनै टाँक फुस्किएको अवस्थामा समेत नयाँ कपडा खरिद गर्न हौसिन्छन् । यहाँनेर फोकटमा पैसा खेर जान्छ र धनी बन्ने चाहनामा धक्का लाग्न पुग्छ । कपडा नयाँ चाहिने होइन, सफा लाउनुपर्छ । पुराना ठानिएका कपडा धोइधाइ गरी लाउने हो भने धन फोकटमा खर्च हुँदैन । सुन्दा सामान्य लाग्छ, तर यहीँबाट मान्छेका धन चुहिएको देखिन्छ ।
महिलाहरुको कुरा पनि त्यस्तै छ । एक महिलाले आफूले नलाए पनि वा कहिलेकाहीँ चाडपर्वमा लाउने तरिकाले दराजभरि नयाँ–नयाँ साडी, कुर्तासुरूवाल र अन्य कपडाहरु खाँदाखाँद गरेर राखेको भेटिन्छ । नपत्याए हरेकले आफ्नो श्रीमतीको दराज खोलेर हेर्दा हुन्छ । हरेक महिलाको दराजमा कम्तीमा १० ओटा साडी भेटिन्छ, तर पहिरिएको भने किनेदेखि आजसम्म एक वा दुईपटक पनि होइन । सत्य यही हो । घरभरि कपडा थुप्रिएर घरै कुरुप भैसकेको अवस्था छ र पनि उस्तैपरे महिलाहरु नयाँ साडी किनेर थुपार्ने अवस्थामा पुग्छन्, तर दराजमा थुपारेका साडीतर्फ आँखा पु¥याउँदैनन् । कुर्तासुरूवालको कुरा पनि त्यही हो । यसरी कपडा खरिदमा फोकटमा नेपाली धन खेर गएको छ । कपडा लाउन नपुगेर खर्च गरेको अवस्था होइन कि लाउन उपयुक्त कपडासमेत लाउन आनाकानी गर्ने भड्किएको मनका कारण धन खेर गएको अवस्था छ । यसरी धन खेर गएपछि कसैको धनी बन्ने इच्छा पूरा हुने कल्पना गर्न सकिन्न ।
अब केही प्रमाणित तथ्यतर्फ पनि हिसाब हेरौँ । जहाँ आवश्यक छैन त्यहाँनेर पनि नेपालीहरुले फोकटमा धन उडाइरहेका छन् । जस्तो कि नेपाल ९४ प्रतिशत हिन्दुधर्म मान्ने मान्छेहरु बस्ने देश हो । पूजाआजा र बिहे–व्रतबन्धको कुरा गरिसाध्य छैन । यस्ता धार्मिक कार्यमा नरिवल नामको फल अनिवार्य गरिएको छ । नरिवल चढाएमात्रै नेपालका देवीदेवता खुसी हुने प्रचार गरिएको छ र नेपालमा नपाइने वा औधी कम पाइने नरिवल विदेशबाट आयात गरेर नेपाली देवीदेवता खुसी पार्ने प्रयास गरिएको छ । नरिवल खरिदमा मात्रै नेपालले वार्षिक करोडौँ रूपैयाँ विदेशलाई बुझाएको प्रमाण उपलब्ध छ । नरिवलको सट्टा अम्बा चढाएर नेपाली देउताहरुलाई खुसी पार्ने चलन चलाइँदो हो त बर्सेनि करोडौँ रूपैयाँ विदेश जाने थिएन । यो फोकटको खर्चबाट नागरिकहरुको धन विदेशिएको प्रस्ट देखिन्छ ।
अब महिलाहरुका लागि श्रृङ्गारका सामग्री जुन तरिकाले विदेशबाट आयात गरिएको छ त्यो खर्चको हिसाब गर्दा कहाली लागेर मुखबाट जिब्रो बाहिर आउँछ । नङ पालिस, लिपस्टिक, थरीथरीका क्रिम र पाउडरलाई मात्रै उदाहरण मान्ने हो भने पनि फोकटमा स्वदेशी धन विदेशमा गएको छ र यो प्रक्रियाले नेपालीलाई धनी हुन दिएको छैन । फोकटको खर्चबाट धन विदेशिएको अवस्थालाई नाङ्गो आँखाले समेत देख्न सकिने दह्रो उदाहरणचाहिँ के हो भने अरबौँ रूपैयाँबराबरको डिजेल र पेट्रोल आयात हो । हेर्दाहेर्दै विदेशीले नेपालका बाटाहरु र घरआँगनमै राख्ने ठाउँ नहुने गरी कार, मोटरसाइकल, स्कुटर र अनेक नाम र आकारका सवारीसाधनहरु पठाइदिएका छन् । मर्मत र नयाँ खरिदमा खेर गएको धनको कुरा छाडौँ, प्रत्येक दिन ती सवारीसाधनमा हालिने डिजेल, मोबिल र पेट्रोलबापत झन्डै पाँच भागको एक भाग नेपाली धन विदेशिएको छ । एक दिन होइन, दुई दिन वा महिना व वर्ष होइन, वर्षौंदेखि यो धन खेर फाल्ने काम भइरहेको छ । नेपालमा १० वर्षमात्रै निजी सवारीसाधन आयात बन्द गरेर सरकारी नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने हो भने अरबौँ होइन, खरबौँखरब रकम बचत हुन्छ र नेपाल धनी हुन समय लाग्दैन । जब देश धनी हुन्छ तब नागरिक स्वतः धनी हुन्छन् ।
यी त भए धन खेर जाँदा नागरिक धनी हुन नसकेको प्रसंग । अब कमाउनेतर्फबारे केही चर्चा गरौँ । वास्तवमा धन कमाएर धनी बन्न कठिन विषय होइन । मानवजीवन प्रकृतिको उपहार हो । हामी बाँच्नका लागि जन्मिएको हो । जन्म र मृत्युको बीचमा रहेको जीवन बाँच्नका लागि हो । मान्छे धन बटुल्न जन्मिएको होइन । धनलाई बाँच्नका लागि सहयोगी साधनको रुपमा मात्रै स्वीकारिएको हो । जीवनको लक्ष्य धन बटुल्न हो भन्ने बुझाइ गलत हो । जतिसुकै धन थुपारे पनि मृत्यु निश्चित भएको हुँदा आफूसँग भएको धन कसै न कसैलाई छाड्नुपर्ने भएको हुँदा उपयुक्त पात्रलाई छाड्ने कामलाई एक हदसम्म ठीक मान्न सकिएला, तर आँखा चिम्लिएर धन बटुल्नमात्रै सोच्ने काम कदापि ठीक होइन । फेरि पनि त्यो गलत इच्छा पूरा नगरी छाड्दिनँ भन्नेहरुका लागि पनि धन थुपारेर धनी हुन यति सजिलो छ कि सुन्दा पनि मान्छेलाई अचम्म लाग्छ !
परिश्रम नगरी धनी हुन सकिन्न यो साँचो हो । मौसम वा बेमौसममा पाइने रायो वा मूलाको साग सस्तोमा खरिद गरेर गुन्द्रुक बनाउन सकिन्छ । हिजोआज काम गरेर भन्दा गफै गरेर खाने मान्छेको संख्या बढेको हुँदा धन भएका तिनै अल्छी नागरिकहरुलाई गुन्द्रुक बेचेर पनि दैनिक २ हजार बटुल्न सकिन्छ । एक परिवारको खर्च मासिक २० हजार भए पनि एउटा गुन्द्रुक व्यापारीले मासिक ४० हजार कमाएर बचत गर्न सक्छ । मासिक ४० हजार सानो रकम हुँदै होइन । कुनै व्यक्तिले घरमै कागतीको अचार बनाएर बट्टामा प्याक गरेर बजारमा बेच्न सक्छ । कागतीमात्रै होइन, अरु खालका अचार बनाएर बेच्न सक्छ । यसबाट मनग्य आम्दानी गर्न सक्छ । मस्यौरा मन नपर्ने मान्छे नेपालमा शायदै होलान् ! मास र कर्कलोको पातबाट मस्यौरा बनाउन कठिन छैन । कसैले मस्यौरा उत्पादन गरेर बेच्न सुरू गर्दा धनी हुन एक वर्ष लाग्दैन । नेपालमा दारीजुँगा र कपाल काट्ने जनशक्ति अपवादलाई छाडेर सबै छिमेकी देश भारतबाट नेपालमा आएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि डरले भारतीय हजामहरु आफ्नो देश फर्र्किए । नेपाली नागरिकहरुको दारीजुँगा र कपाल बढेर बिजोग भयो । केही महिनापछि भारतीय हजामहरु नेपाल आए र नेपाली अनुहार र टाउकोबाट रौँ भगाइयो । फेरि पनि साँचो कुरा भन्नैपर्छ, भारतीय हजाम दाइभाइहरुले अरबौँ रूपैयाँ होइन, नेपालबाट बर्सेनि खरबौँ रूपैयाँ आफ्नो देश लगेका छन् । धनी बन्न चाहने कुनै नेपालीले कपाल काट्ने र दारी खौरिने काम सिकेमात्रै महिनामा कम्तीमा ४० हजार कमाउन सक्छ । ४० हजार कमाउने मान्छे धनी हुन समय लाग्दैन । जुत्ता सिलाउने काम गरे मासिक ४५ हजार कमाउन सकिन्छ, तर यसका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो सर्त हो ।
फेरि एउटा तीतो यथार्थ के हो भने नेपाली नागरिकहरुले यस्ता काम गर्न मान्दैनन् । विदेशमा सडकमा कुचो बढार्न तम्सिने र स्वदेशमा काम गर्दा इज्जत जाने तर्क पेश गर्ने बानीले नेपाली चुर्लुम्मै डुबेका छन् । यो कोणबाट हेर्दा नेपालीहरु यता न उताको अवस्थामा रूमल्लिएका छन् । धनी हुन त सकिन्थ्यो, तर एकातिर फोकटको खर्च नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर काम गर्दा इज्जत जाने डरले ग्रसित भएका छन् । कोही धनी बन्न चाहन्छ भने उपाय यही हो कि फोकटको खर्च बन्द गर्नु, काम गर्नु, काम गर्दा बेइज्जत हुन्छ कहिल्यै नसोच्नू ।